Bastian Schweinsteiger iyo Lukas Podolski oo loo sameynayo kulamo sagootin ah – Gool FM
Bastian Schweinsteiger iyo Lukas Podolski oo loo sameynayo kulamo sagootin ah
(Germany) 16 Agoosto 2016. Bastian Schweinsteiger iyo Lukas Podolski ayaa loo sameynayaa kulamo macaslaameyn ah kaddib markii ay ka fariisteen ciyaaraha caalamiga ah sida uu xaqiijiyay xiriirka kubbada cagta Jarmalka.
Xiddiga qadka dhexe ee Man United Schweinsteiger ayaa soo af jaray waayihiisa xulka Jarmalka bishii July wuxuuna kasbaday 120-kulan uu u safty xulkiisa 12-sano uu matalayay, waxaana lagu abaal marin doonaa kulan sagootin ah 31-da bishan Agoosto ciyaar ay la yeelan doonaan xulka Finland.
Podolski, laacibka saddexaad ee ugu safashada badan taariikhda xulka Jarmalka 129-kulan ayaa ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah isniintii wuxuuna sidoo kale isna heli doonaa kulan sagootin ah.
Sababo la xiriira dhaawaca uu qabo weeraryahankii hore ee Arsenal weli lama xaqiijin taariikhda ama goorta loo sameyn doono kulanka sagootinta ah.
“Bastian iyo Lukas mudnaan wayn ayay u leeyihiin xulka qaranka iyo kubbada cagta Jarmalka guud ahaan,” Tababaraha xulka Joachim Low ayaa sidaa yiri.
“Waan ogahay inay micno wayn ugu fadhiso iyaga inay markale u ciyaaraan Jarmalka.
“Tani waxay caddeynaysaa micnaha ay weli u leeyihiin xulka.”.
Marco Reus oo ugu dambeyn helay Liisankii uu BAABUURTA ku kaxeyn lahaa